သစ်ကောင်းအိမ် ● နှစ်ချိုမြစ် …. မဟာတံတိုင်းကြီးနောက်ကွယ်က ပင်လယ် – MoeMaKa Burmese News & Media
ကျနော်သည် သူဒီရေတက်ချိန်ကို စောင့်ပြီး နောက်ပြောင်တတ်လေ့ရှိရာ တနေ့တော့ ကို (…….) ခင်ဗျား အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မစဉ်းစားသေးဘူးလား..ဟူ၍ သူ့နားထဲ ဗုံးခွဲသလို အခံရခက်ဆုံးစကားလုံးကို အချိန်ကိုက် ပစ်သွင်းလိုက်ချိန်တွင်ဟာ…ခနဲဆိုပြီး ပါးစပ်ကို အားယူ၍ မျက်နှာရှေ့တွင် ဖရိုဖရဲ ဝဲကျနေသော ဆံပင်ရှည်များကို ပုခုံးပေါ်ခါတင်လိုက်ကာ စားပွဲကို လက်သီးနဲ့ထုရင်း … ငါ့အချစ်ရေးကို မဟာတံတိုင်းကြီးကွယ်နေတာကွ.. မဟာတံတိုင်းကြီးကွယ်နေတာ ….ဟု တုန်ယင် အက်ကွဲသော ငိုသံပါကြီးဖြင့် အော်ဟစ်လေတော့သည်။ ကျနော်က နေပါဦး.. မဟာတံတိုင်းကြီးက ဘယ်လို လာကွယ်နေ တာတုံး ရှင်းစမ်းပါဦးဆိုပြီး အတင်းချော့မော့မေးတော့မှ ဘယ်မဟာတံတိုင်းကြီး ဖြစ်မလဲ.. ငါ့အမေကွ.. ငါ့အမေဟုဆိုကာ အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြလေသည်။
သူ ပိုးပန်းနေသော မျက်စောင်းထိုးအိမ်မှ ကောင်မလေးမှာ (သူထက်အသက် ထက်ဝက်ငယ်) ရပ်ကွက်နားက ဈေးတွင် ဆိုင်ဖွင့်ထားလေရာ မနက်အစောကြီးထ၍ ဆိုင်ဖွင့်ရန် ဈေးသို့အသွား သူလည်း မနက်အစောကြီး လိုက်ထပြီး ပိုးပန်းရ ရှာလေသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ မနက် ၁၀ နာရီလောက် အတင်းခေါ်နှိုးမှ အိပ်ရာထလေ့ရှိသော သူသည် ထိုတလောတွင် မနက် နှစ်နာရီခွဲ သုံးနာရီ တိုင်လျှင် ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်နှင့် နိုးနေပြီး ရေမိုးထချိုး ဖီးလိမ်းအလှပြင် လုပ်လေရာ များစွာသော ညီအကို မောင်နှမများကြားထဲတွင်မှ ဆိုဆုံးမရအခက်ဆုံး သားကြီးသြရသလည်းဖြစ်သည့် သူ့ အချစ်ဆုံး သားကြီးအား စိတ်မချဖြစ်ကာ သူထိုင်လျှင် ထိုင် သူထလျှင် လိုက်ထပြီး အရိပ်အခြေကြည့်၍ နင်ဘယ်သွားမလို့လဲ.. ဘာလုပ်မလို့လဲ.. အချိန်မတော် အခါမတော်ကြီးကို.. စသဖြင့် မေးတန်မေး ပြောတန်ပြော သူသွားလေရာ နောက်ယောင်ခံပြီး လိုက်လံ ချောင်းမြောင်းတန်သည် ချောင်းမြောင်း လုပ်ရရှာလေရာ သူခမျာ အုံပုံးဘဝဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ပိုးမရ ပန်းမရ…။ သူ့အချစ်ရေးတွင် မဟာတံတိုင်းကြီး ကား အတိုင်းအဆမရှိ ကာဆီးကာ နေလေတော့၏။
← ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသော ထိုအရပ် …
ဖိုးရွှေညီမှိုင်း ● ရာဇဝင်​ →